Nhanganyaya yegirazi yakadzivirirwa ine yakakosha mapofu
Yakasungirirwa girazi ine yakakosha inopofumadza, inonziwo isina girazi girazi ine shutter, inova yechinyakare sun-shading chigadzirwa. Kazhinji, zvakapofumadza zviri mugomba regirazi zviri zvemanyorerwo inodzorwa neyakagadzirwa magineti simba mukati. Tsananguro yechigadzirwa Kazhinji, Chinyorwa chetsetse kana mehendi met ...
Maitiro ekukurumidza kusiyanisa mhando yeinodzivirira girazi
Yakavharirwa magirazi madhoo uye mahwindo zvishoma nezvishoma achiva iwo anodikanwa matsva emikova uye mawindo zvigadzirwa mune yekushongedza imba nekuda kwavo kwakanyanya kupisa kuchengetedza uye kurira kwekudzivirira mhedzisiro. Asi chero bedzi iwe uchifamba-famba mumusika wezvinhu zvekuvaka, vanhu vanozoona kuti kune akawanda t ...
Insulating girazi inodziya kumucheto nzvimbo dzisingakwanise kufuratirwa
Zvinoenderana nezvinodiwa zvakasiyana, girazi rekudzivirira rinogona kugadzirwa nemagirazi akasiyana siyana. Semuenzaniso, inoisa girazi inoumbwa negirazi rakamisikidzwa, iro rine ruzha rwekudzivirira inzwi. Iyo mhango dhizaini ine matatu magirazi machira uye maviri matanda anowedzera simba-kuchengetedza. Asi chii chinotara ...
Iwe unonyatso kuziva here izvo zvishanu zvinhu zvinokanganisa mhando yeinodzivirira girazi?
Kubva pakushandiswa kwegirazi rinovhara, kugadzirwa kwayo kwakasangana negirazi regirazi, girazi rakareruka, chita-chiteshi chisimbiso, kaviri chiteshi chisimbiso uye chakasanganiswa cherabha tambo yemhando inodzivirira girazi uye zvichingodaro. Mushure mepedyo ...
Dhizaini yakakosha yekudzivirira girazi
1. Groove aluminium mhando mbiri yekuisa chisimbiso butyl yekunamatira kwekutanga kuiswa chisimbiso; Chisimbiso chechipiri chinonyanya polysulfide glue uye silicone glue. Polysulfide yekunamatira inokodzera hwindo kana rakagadzirwa girazi keteni rusvingo; Silicone guruu ndiye Su ...
Ruzivo rwekutanga rwekudzivirira girazi
With kukura epamba girazi kubudiswa indasitiri uye kudzamiswa kwevanhu kunzwisisa zvakaisvonaka kuita kuti insulating girazi, chikumbiro kukura insulating girazi iri kuramba kuwedzera. Kuwedzera yakafara kushanda mugirazi curtai ...